သမိုင်းလမ်းဆုံမှာ ကလေးတွေကို တို့ဆေးနဲ့ ဖမ်းပြီး ပိတ်လှောင်ထားတဲ့ကိစ္စ (အဖြစ်မှန်) •
04/12/2019 Yan Naing News 0
မနက်က ကျတော်တို့တိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူခိုးဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ်စကို ဘယ်လိုတွေ​ပွသွားလဲမသိဘူး။ သမိုင်းလမ်းဆုံ မှာ ကလေးတွေကို တို့ဆေးနဲ့ တို့ပီး အခန်းပိတ်လှောင်ထားတာတွေရော
တစ်ချို့က ဓားပြဝင်စီးတာတွေရော ရှုပ်နေတာပဲ အစုံပဲ…. တကယ်က ဒီလိုပါ … ။
မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ ကျတော့အဖေက အိမ်သာထတက်တယ် ” ဘုန်း” ဆိုပီး တစ်ခုခု အောက်ဆုံးထပ်က ခေါင်မိူးပေါ် ပြုတ်ကျသံကြားလို့ သူဓာတ်မီးနဲ့ နောက်ဖေး ပြတင်းပေါက်ကနေထိုးကြည့်တယ် အာ့မှာ ခေါင်မိုးပေါ်မာ လူတစ်ယောက်ကလဲနေတယ် နောက်တစ်ယောက်က C5 အခန်း​​နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်ကနေ ပုဆိုးတေ စောင်တေ​ကိုကြ်ိုးလိုချည်ထားပိး ဆင်းနေတာတွေ့တယ် … ။
အာ့ဒါနဲ့ ကျန်တဲ့အခန်းတေလိုက်နှိုး ကျတော်က အာ့သူခိုးကိုမီးနဲ့လှန်းထိုးထား ရဲခေါ် ရပ်ကွက်လူကြ်ိးတေဖုန်းလှမ်းဆက် အာ့လိုတွေလုပ်နေတုန်းမာပဲ ကြိုးနဲ့ဆင်းတဲ့နောက်တစ်ကောင်ကလဲ လက်ကအန်သေပီး ထပ်ပြုတ်ကျတယ် ဒါက်ို ကျတော်တိုက်ဘေးက ရွှေကောင်းကင် တည်းခိုခန်းက waiter ကောင်လေး လေးယောက်လောက်မြင်တော့ တုတ်တေ ဆွဲပီး ခြောက်ကြတယ် ခနကြာတော့ တွဲလောင်းကြနေတဲ့ ကြ်ိုးကို C5 အခန်းထဲကနေ ဆွဲသိမ်းသွားတယ် သဘောက အခန်းထဲမာ လူထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့ … ။
သူခိုးနှစ်ကောင်ကတော့ မထနိုင်သေးဘူး။ လူးလိမ့်နေတာပဲ။ ကျတော်ကသေပီတောင် ထင်တာ နဲနဲနောနောအမြင့်မှမဟုတ်တာ ပြုတ်ကျတာက၊ အာ့တာနဲ့ အဖေနဲ့အခြားလူတွေ ဝိုင်းပြီးဖမ်းကြ မေးမြန်းကြတော့ သူတို့က မြန်မာစကားမတတ်ဘူး ဘင်္ဂါလီလိုတွေပြောတယ်။ အပေါ်မှာ နောက်ထပ်လူတေရှိသေးတယ်လို့ ​လက်ဟန်ခြေဟန်တွေနဲ့လုပ်နေတယ် … ။
အခန်းပိုင်ရှင်က ငှားထားတာ ကိုယ်တိုင်မနေဘူး။ အာ့အခန်းကပြောရမယ်ဆို အလွတ်ကြီး။ ဒါမဲ့ အလွတ်ကြီးအခန်းကို ဘာလို့ လာခိုးမှာလဲ ပေါ့။
အခန်းက ရှေ့ကသော့ခတ်ထားတာ ပြောချင်တာက အခန်းထဲက ဖွင့်လို့မရဘူး အပြင်ကသော့ခတ်ခဲ့တာ အခန်းထဲမာ အာ့လို ကျတော်တို့ဘာသာမဟုတ်တဲ့ လေးယာက်ငါးယောက်လောက်ရှိသေးတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်ကခေါ်လာလဲတော့ ကျတော်သေချာမသိဘူး မလေးရှားပို့ပေးမယ်ဆိုပီး ခေါ်လာတာတဲ့ သူတို့ထဲကမြန်မာစကား လည်လည်ဝယ်ဝယ်ပြောတတ်တဲ့ လူက ပြောပြတယ်။ အစာလဲမှန်မှန်မကျွေးပဲ အလုံပဲပိတ်နေရလို့ နောက်ဖေးကနေ အာ့လိုထွက်ပြေးကြတယ်။
သူတို့လက်ထဲမှာလဲ ကိုယ်စီဖုန်းတွေရှိတယ်။ ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးယောက်ကျားလေးတွေ သန်သန်မာမာတွေ ကျတော်တို့သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတယ်။ တိုက်ခန်းမှာ ရှိတဲ့ယောက်ကျားလေးတွေအကုန်ဝိုင်းပြီး၊ ​​စဖြစ်တာက ၃နာရီလောက် ရဲတိုင်တာက ၃နာရီခွဲ တကယ်ရောက်လာတာက ၆နာရီပါ။
ကြားမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးး အဖေရယ် ကျန်တဲ့အခန်းက ယောက်ကျားတွေ ဝိုင်းဖမ်း ဝိုင်းလုပ်ကြထားတာပါ။ အခုတော့ အားလုံးကိုရဲခေါ် သွားတယ်။ အာ့အခန်းပိူင်ရှင်ရယ်၊ အိမ်ငှားပွဲစားရယ် အကုန် ဖမ်းသွားတယ် …. ။ အိမ်ငှားကတော့ ဆက်သွယ်လို့မရသေးသလို တစ်ခါမှလဲမမြင်ဖူးဘူး။ ​
အကြောင်းရင်းက အက်လိုပါ ဒါမဲ့ အခုအမေဈေးသွားတော့ သတင်းတွေက ဘာတေမှန်းမသိဘူးလျှောက်ပြန့်ကုန်ပြီ။ ရှင်းပြတာထက် အလကားနေအလကား တို့ဆေး တို့ဆေးနဲ့ ကလေးတွေ ဖမ်းထားတဲ့ တိုက်ခန်းမဟုတ်တာ သိစေချင်လို့ ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး … ။ သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ အလုပ်ရမယ်ဆိုပီးလိုက်လာကြတဲ့ လူ​ငယ်ယောက်ကျားလေးတွေ၊ ကျန်တာကတော့သူတို့အပိူင်းပေါ့။ ဘာသာရေးကိစ်စတွေကလဲ ရှိနေတော့၊ အာ့တွေဝင်မပါချင်ဘူး။
ခရက်ဒစ် – Thiri May Thaw
သမိုငျးလမျးဆုံမှာ ကလေးတှကေို တို့ဆေးနဲ့ ဖမျးပွီး ပိတျလှောငျထားတဲ့ကိစ်စ (အဖွဈမှနျ)
မနကျက ကတြျောတို့တိုကျမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ သူခိုးဖမျးမိတယျဆိုတဲ့ကိဈစကို ဘယျလိုတှေ​ပှသှားလဲမသိဘူး။ သမိုငျးလမျးဆုံ မှာ ကလေးတှကေို တို့ဆေးနဲ့ တို့ပီး အခနျးပိတျလှောငျထားတာတှရေော
တဈခြို့က ဓားပွဝငျစီးတာတှရေော ရှုပျနတောပဲ အစုံပဲ…. တကယျက ဒီလိုပါ … ။
မနကျ ၃ နာရီလောကျမှာ ကတြော့အဖကေ အိမျသာထတကျတယျ ” ဘုနျး” ဆိုပီး တဈခုခု အောကျဆုံးထပျက ခေါငျမိူးပျေါ ပွုတျကသြံကွားလို့ သူဓာတျမီးနဲ့ နောကျဖေး ပွတငျးပေါကျကနထေိုးကွညျ့တယျ အာ့မှာ ခေါငျမိုးပျေါမာ လူတဈယောကျကလဲနတေယျ နောကျတဈယောကျက C5 အခနျး​​နောကျဖေးပွတငျးပေါကျကနေ ပုဆိုးတေ စောငျတေ​ကိုကျွိုးလိုခညျြထားပိး ဆငျးနတောတှတေ့ယျ … ။
အာ့ဒါနဲ့ ကနျြတဲ့အခနျးတလေိုကျနှိုး ကတြျောက အာ့သူခိုးကိုမီးနဲ့လှနျးထိုးထား ရဲချေါ ရပျကှကျလူကျွိးတဖေုနျးလှမျးဆကျ အာ့လိုတှလေုပျနတေုနျးမာပဲ ကွိုးနဲ့ဆငျးတဲ့နောကျတဈကောငျကလဲ လကျကအနျသပေီး ထပျပွုတျကတြယျ ဒါကျို ကတြျောတိုကျဘေးက ရှကေောငျးကငျ တညျးခိုခနျးက waiter ကောငျလေး လေးယောကျလောကျမွငျတော့ တုတျတေ ဆှဲပီး ခွောကျကွတယျ ခနကွာတော့ တှဲလောငျးကွနတေဲ့ ကျွိုးကို C5 အခနျးထဲကနေ ဆှဲသိမျးသှားတယျ သဘောက အခနျးထဲမာ လူထပျရှိသေးတယျပေါ့ … ။
သူခိုးနှဈကောငျကတော့ မထနိုငျသေးဘူး။ လူးလိမျ့နတောပဲ။ ကတြျောကသပေီတောငျ ထငျတာ နဲနဲနောနောအမွငျ့မှမဟုတျတာ ပွုတျကတြာက၊ အာ့တာနဲ့ အဖနေဲ့အခွားလူတှေ ဝိုငျးပွီးဖမျးကွ မေးမွနျးကွတော့ သူတို့က မွနျမာစကားမတတျဘူး ဘင်ျဂါလီလိုတှပွေောတယျ။ အပျေါမှာ နောကျထပျလူတရှေိသေးတယျလို့ ​လကျဟနျခွဟေနျတှနေဲ့လုပျနတေယျ … ။
အခနျးပိုငျရှငျက ငှားထားတာ ကိုယျတိုငျမနဘေူး။ အာ့အခနျးကပွောရမယျဆို အလှတျကွီး။ ဒါမဲ့ အလှတျကွီးအခနျးကို ဘာလို့ လာခိုးမှာလဲ ပေါ့။
အခနျးက ရှကေ့သော့ခတျထားတာ ပွောခငျြတာက အခနျးထဲက ဖှငျ့လို့မရဘူး အပွငျကသော့ခတျခဲ့တာ အခနျးထဲမာ အာ့လို ကတြျောတို့ဘာသာမဟုတျတဲ့ လေးယာကျငါးယောကျလောကျရှိသေးတယျ။ သူတို့ကို ဘယျကချေါလာလဲတော့ ကတြျောသခြောမသိဘူး မလေးရှားပို့ပေးမယျဆိုပီး ချေါလာတာတဲ့ သူတို့ထဲကမွနျမာစကား လညျလညျဝယျဝယျပွောတတျတဲ့ လူက ပွောပွတယျ။ အစာလဲမှနျမှနျမကြှေးပဲ အလုံပဲပိတျနရေလို့ နောကျဖေးကနေ အာ့လိုထှကျပွေးကွတယျ။
သူတို့လကျထဲမှာလဲ ကိုယျစီဖုနျးတှရှေိတယျ။ ကလေးတှမေဟုတျဘူးယောကျကြားလေးတှေ သနျသနျမာမာတှေ ကတြျောတို့သူတို့ကို စောငျ့ကွညျ့နတေယျ။ တိုကျခနျးမှာ ရှိတဲ့ယောကျကြားလေးတှအေကုနျဝိုငျးပွီး၊ ​​စဖွဈတာက ၃နာရီလောကျ ရဲတိုငျတာက ၃နာရီခှဲ တကယျရောကျလာတာက ၆နာရီပါ။
ကွားမှာ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီးး အဖရေယျ ကနျြတဲ့အခနျးက ယောကျကြားတှေ ဝိုငျးဖမျး ဝိုငျးလုပျကွထားတာပါ။ အခုတော့ အားလုံးကိုရဲချေါ သှားတယျ။ အာ့အခနျးပိူငျရှငျရယျ၊ အိမျငှားပှဲစားရယျ အကုနျ ဖမျးသှားတယျ …. ။ အိမျငှားကတော့ ဆကျသှယျလို့မရသေးသလို တဈခါမှလဲမမွငျဖူးဘူး။ ​
အကွောငျးရငျးက အကျလိုပါ ဒါမဲ့ အခုအမစြေေးသှားတော့ သတငျးတှကေ ဘာတမှေနျးမသိဘူးလြှောကျပွနျ့ကုနျပွီ။ ရှငျးပွတာထကျ အလကားနအေလကား တို့ဆေး တို့ဆေးနဲ့ ကလေးတှေ ဖမျးထားတဲ့ တိုကျခနျးမဟုတျတာ သိစခေငျြလို့ ကလေးတှမေဟုတျဘူး … ။ သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ အလုပျရမယျဆိုပီးလိုကျလာကွတဲ့ လူ​ငယျယောကျကြားလေးတှေ၊ ကနျြတာကတော့သူတို့အပိူငျးပေါ့။ ဘာသာရေးကိဈစတှကေလဲ ရှိနတေော့၊ အာ့တှဝေငျမပါခငျြဘူး။
ခရကျဒဈ – Thiri May Thaw
သတိထားမိဖို့ မလွယ်တဲ့ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၇)မျိုး
Hits Today : 4988
Total Hits : 1248593